टिका लाउन जाँदा छाता पनि बोक्नुहोस्ः पानी पर्न सक्ने
काठमाडौं । दशैंको टिकाको दिन देशको पूर्वी तथा मध्य क्षेत्रमा पानी पर्न सक्ने संभावना रहेको मौसमविदले पूर्व अनुमान गरेका छन् । मौसमविदका अनुसार असोज १३ र १४ गते सामान्यदेखि मध्यम खालको वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ ।
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालको पूर्वी....
​भाइबर आउट गैरकानुनी, नेपालमा लाग्यो प्रतिबन्ध
काठमाडौं । मुलुकमा भाइबर आउट (आइपी) सेवाबाट मोबाइल र ल्यान्डलाइन सेवामा फोन गर्नु गैरकानुनी रहेको पाइएको छ । नेपालभित्र भाइबर आउट सुविधामा प्रतिबन्ध समेत लागेको छ ।
मुलुकभित्र भाइबर आउटबाट अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीका मोबाइल र ल्यान्डलाइनमा फोन गरेको भेटिएको भन्दै....
​टेलिकमले ल्यायो अहिलेसम्मकै सस्तोमा विभिन्न योजना
इटहरी । नेपाल टेलिकमले दशैंको अवसरमा आफ्ना ग्राहकहरुका लागि विभिन्न बोनस तथा छुट योजना ल्याएको छ । टेलिकमले रिचार्ज, युट्युव डाटा प्याकेज, कम्बो प्याक, फोरजी सिमलगायतमा विशेष छुट योजना ल्याएको हो ।
जसअनुसार जिएसएम तथा सिडिएमए प्रिपेड मोबाइलमा रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत....
​आइफोन एट र आइफोन एट प्लस सार्वजनिक
काठमाडौं । अमेरिकी कम्पनी एप्पलले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा मंगलबार एक विशेष कार्यक्रम गरी आइफोनको नयाँ संस्करण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा एप्पलले नयाँ संस्करण आइफोन एट र आइफान एट प्लस सार्वजनिक गरेको हो । यस्तो छ आइफोन एटको विशेषता
– नयाँ आइफोनको स्क्रिन ५....
वर्ल्डलिंकले ल्यायो ‘ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता’ अफर
काठमाडौँ । चाँडपर्वको अवसरमा ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुलाई सेवा दिनका लागि विभिन्न कम्पनीले अफर सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसै क्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको क्षेत्रमा वर्ल्डलिंकले पहिलो पटक ‘ए हजुर कता ! इस्क्राच गरौँ यता’ भन्ने अफरको सुरुवात गरेको छ ।
यो अफर अन्र्तगत....
​म्यासेन्जर चलाउँदै हुनुहुन्छ साबधान ! फैलिँदैछ भाइरस
आजभोलि प्राय सबै व्यक्तिले फेसबुक र म्यासेन्जर चलाउँने गरेको पाइन्छ । जोकोहि पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम तथा ट्विटरमा जोडिएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा आवश्यकता भन्दा बढी यसको प्रयोगले धेरैलाई समस्यामा पारिरहेको हुन्छ ।
तर अब फेसबुक च्याटमा धेरै झुण्डिरहनेहरु सावधान हुनुपर्ने भएको....
​आज देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह
काठमाडौं । शनिबार पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविदले बताएका छन् । बाढी पूर्वानुमान शाखाले पानी परेसँगै पूर्वको झापाबाट पश्चिममा कञ्चनपुरसम्म रहेका सबै साना नदी तथा महाभारतबाट प्रभाव हुने कन्काई, कमला, बागमती, तिनाउ, पश्चिम राप्ती, बबई, मोहना लगायतमा पानीको सतह बढ्ने अनुमान गरेको छ....
भ्रष्टाचारको अभियोगमा सामसुङ कम्पनीका मालिकलार्इ ५ वर्ष कैद सजाय
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अभियोगमा दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसुङका अर्बपति मालिकका उत्तराधिकारी ली जेय योङलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।
पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हीलाई महाभियोग लागेकै भ्रष्टाचार मुद्दामा ली पनि मुछिएका बताइएको छ । लीलाई गत फरबरीदेखि थुनामा राखिएको छ । सामसुङ....
सीएसइ : नेपालकै नम्वर वान कम्प्युटर इन्स्टिच्युट (अन्तरवार्ता)
न्यूजलय बिहीबार ०८, भदौ २०७४
नेपालमा कम्प्युटर शिक्षाको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने नाम हो सीएसइ अर्थात कलेज अफ सफ्टवेयर इञ्जिनियरिङ । दुई दशक भन्दा अघिदेखि देशका विभिन्न ठाऊँमा गुणस्तरीय कम्प्युटर शिक्षा प्रदान गर्दै आएको सीएसइको सेवा इटहरीमा भने केहि वर्ष अवरुद्ध भएर पुनः सञ्चालनमा आएको छ । यसैको सेरोफेरोमा रहेर....
​ट्विटरमा अब सबैकोे एकाउन्ट भेरिफाइड हुने
अब ट्विटरमा सबैको एकाउन्ट भेरिफाइ हुने भएको छ । अहिलेसम्म ट्विटरले एकाउन्ट भेरिफाई गर्ने सुविधा सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्सपर्सन, पत्रकार र आफूले इच्छाएका व्यक्तिलाई मात्र दिएको थियो ।
एउटा फर्म भरेर सबैजनाले एकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्न सकिने छ । तर, सबै आवेदकहरु सफल हुँदैनन् । जसले प्रमाण....